Taxtụ site na azụmaahịa kọmputa | ECommerce ozi ọma
Taxtụ isi site na azụmaahịa kọmputa
Jose Ignacio | | eCommerce, Ụzọ ịkwụ ụgwọ
Ọ bụrụ n’inwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ azụmaahịa, ịmara na ịnwere obere oge iji dozie akaụntụ gị na ndị isi ụtụ. N'ihi na site na Eprel 1 Ndị na-atụ ụtụ isi nwere ike ịrịọ maka edemede ha, ma nwee ike ibunye ya n'etiti Eprel 23 na June 30 na ntanetị yana site na Mee 5 n'ụzọ ọ bụla nke nkwukọrịta.
Ndị na-ahụ maka ụdị azụmaahịa ọ bụla metụtara ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa anụ ahụ nwere ọhụụ ọhụụ maka nnabata iwu chọrọ na ndị isi ụtụ isi nke mba anyị n'ọnwa ndị na-abịanụ. Ya mere, ka e wee mezuo ọrụ ụtụ isi a, anyị ga-ewepụta usoro ntụzịaka dị mfe ka inwee ike ịkwụ ụgwọ ụtụ isi gị nke bidoro na nkeji nke abụọ nke afọ a.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, ọ dị mkpa iji mesie ya ike na ndị ọchụnta ego na mpaghara ahụ ga-ekwupụta nkwupụta ego ha ga-enweta n'okpuru usoro ntụle ndị dị mkpa anyị ga-ekpughere n'okpuru. Site na ebumnuche bụ isi na ha anaghị ahapụ ihe ọ bụla na nkwalite ọ bụla n'ihi na ọ nwere ike ịfu ha ezigbo ụfụ n'ụdị ntaramahụhụ, ntaramahụhụ ma ọ bụ ụgwọ mgbakwunye na ụgwọ a na-akwụ na azụmaahịa ego ndị a.
1 Tụ isi n'ihe ndị a na-ahụ anya
2 Nyocha onwe onye
3 Ndị ọchụnta ego na-achọghị itinye akwụkwọ nloghachi ụtụ
4 Debe nkwupụta ahụ
5 Inye ego iji mefuo ego na Treasury
6 Ebe obibi n'ịntanetị
Tụ isi n'ihe ndị a na-ahụ anya
Banyere nsogbu nke e-commerce na ahia na-enweghị isi nke ngwaahịa ndị a na-ahụ anya, dị ka enwere ike iwepụta site n'elu, ihe omume ya dị ala n'ezie, ebe ọ bụ na n'ọnọdụ ndị a Internet A na-eji ya dịka ụzọ mgbasa ozi na, ebe o kwesịrị ekwesị, maka inyefe iwu, mana ihe nke azụmahịa ahụ na-aga n'ihu na-eme ka onye zụrụ ya nwee ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, mgbe transferor bụ ụlọ ọrụ guzobere na Spain, a na-eguzobe onye na-azụ ihe na mpụga Mpaghara Obodo nke ngwa nke VAT ma na-ebuga ngwa ahịa na mpụga mpaghara mpaghara Ọha na mpaghara n'ime oge a kara aka, a ga-ahụta ọrụ ahụ dịka mbupụ ngwongwo ewepụrụ na Spain (edemede 21 nke LIVA) nwere ikike iwepu VAT nke onye mbufefe ihe ọma (edemede 94.One.1.º.c) nke LIVA).
Banyere ndị na-akwụ ụtụ isi na-esonye na VAT, n'ụkpụrụ onye na-eweta ọrụ ga-akwụ ụgwọ ụtụ isi. Agbanyeghị, onye a na-atụ ụtụ isi ga-abụ onye ahịa na-anata ha mgbe onye na-eweta ya bụ ụlọ ọrụ emebereghị maka ebumnuche VAT na mpaghara EU ọ bụla na onye nata ha bụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọkachamara e guzobere na mpaghara Obodo. N'aka nke ọzọ, a ga-ahụta ha ọnụ yana ọtụtụ ndị ga-akwụ ụgwọ maka VAT "Ndị nnata nke arụmọrụ nke, site na nleghara anya ma ọ bụ omume aghụghọ ma ọ bụ hapụ, zere mmetụta ziri ezi nke "tụ".
NRC (Nọmba Nkọwa zuru ezu) bụ koodu nke ụlọ akụ mepụtara dị ka ihe akaebe iji mata ego ụtụ isi. Ihe mejupụtara ya bụ mkpụrụedemede 22, gụnyere, n'ụdị ezoro ezo, ozi banyere onye na-atụ ụtụ NIF, ego ole, ihe atụ ahụ, afọ na oge ahụ.
NRC ga - apụta na nnata nke ọrụ ahụ, yana nchịkọta nke data nweta ego. Maka NRC ka ọ dị mma, ọ dị mkpa na data e nyere ndị na-emekọrịta ihe n'oge ịkwụ ụgwọ ziri ezi.
Na nkwupụta na nyocha onwe onye nke metụtara ego, na nke a na-ahọpụtaghị kpọmkwem ụgwọ dị ka ụdị ịkwụ ụgwọ, NRC nke ụlọ akụ ga-etinye iji mee ihe ngosi.
N'aka nke ọzọ, na ịkwụ ụgwọ nke ụgwọ / ụgwọ, ozugbo akwụchara ụgwọ ma nweta NRC, a ga-agwụ usoro a, na-enweghị mkpa maka omume ndị ọzọ. Nwere ike ịchekwa azịza enwetara na NRC dị ka ihe akaebe nke ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ n’inwere nkwụnye ego ahụ site na ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ AEAT mana enwetabeghị ma ọ bụ na edobela nnata ahụ, ị ​​nwere ike ịnweghachite ya na nhọrọ ndụmọdụ kwekọrọ, n’ime withinlọ Ọrụ Elektrọnik, “Usoro Pụrụ iche”, “mentkwụ oftụ Isi”.
Ndị ọchụnta ego na-achọghị itinye akwụkwọ nloghachi ụtụ
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụghị ndị nwe onwe ha niile chọrọ ka ha wepụta ya. E nwere di na nwunye. Nke a bụ ihe banyere ndị nwere afọ na-erughị euro 1.000 na-akpata ego ha na-erughị euro 500. Agbanyeghị, nke abụọ dịkarịsịrị mfe. Ego enwetara site na ọrụ ga-erughị euro 22.000 site n'aka otu onye na-akwụ ụgwọ. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị otu onye na-akwụ ụgwọ, njedebe ga-abụ euro 11.200.
N'aka nke ọzọ, ịlaghachi na isi ala na isi obodo ga-eruru euro 1.6000 kwa afọ. Tụkwasị na nke ahụ, ego ndị a na-enweta na ala, ya bụ, inwe ala na ụlọ ndị mepere emepe, anaghị akarị puku euro. Dị ka ọ dị na mmega a, ị ga-enwe ihe ọzọ ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere akụkọ ndị emepụtara na mgbanwe mgbanwe ụtụ isi kachasị wee nwee ike ịmasị gị.
N'echiche a, ọ dịkwa oke mkpa ịkọwapụta na enwere ike ị yigharị ịkwụ ụgwọ, ọ bụrụhaala na enwere ike ịkọwa ihe iji kwado mkpebi a. Ndị ọrụ ụtụ isi ga-arụ ọrụ ndị a na-enweghị ụdị mgbakwunye ọzọ. Site na kalenda edegoro na ndị na-akwụ ụtụ isi nwere ike ịjụ site na ugbu a. Yabụ na n'ụzọ dị otu a, a ga-eme ka mmezu nke ego ndị a wee kwalite. Dị ka ọ dị na ndị na-akwụ ụtụ isi, ebe ọ bụ na n'echiche a enweghị ọdịiche dị mkpa bara uru.
Debe nkwupụta ahụ
Ozugbo emechara ka o doo anya onye na onye na-ekwesịghị itinye nloghachi ahụ, ọ dị mkpa ịkọwa etu esi eme ya. Ihe mbụ ị kwesịrị ịma bụ ụdị ma ọ bụ ụdị, dịka Agencylọ Ọrụ Taxtụ na-enwe mmasị ịkpọ ya, nke ị ga-ejupụta.
Nlereanya D-100: O bu nkwuputa nke ndi mmadu n’abu n’adighi ego, ya bu, ego a na enweta n’ego a na - enweta kwa afo site na oru nke onwe gi.
Ụdị 100: Ọ bụ akwụkwọ e ji enweta ego ma ọ bụ nloghachi nke ụtụ ego nke onwe gị, nke ngosi ya dịkwa mkpa.
Iji mezuo usoro ụtụ isi a, ị nwere akụ nke ịme ya na ntanetị, a na-eme ihe niile site na oku Nna omume. Ngwa a n'ime weebụsaịtị nke Agencylọ Ọrụ Na-ahụ Maka requirestụ na-achọ ntinye aka eletrọniki, ID kọmputa ma ọ bụ koodu PIN nke webụsaịtị ahụ nyere maka oge 24. Ebe ị nwere ike ịhazi ya ngwa ngwa iji dozie akụkọ nke azụmahịa gị n'ịntanetị n'afọ a.
Mgbe ị na aka nke ọzọ, ị kwesịrị ị na-eburu n'uche site ugbu a gaa na Agencylọ Ọrụ Taxtụ nwere niile data nke ndị na-enweta a payroll, n'ihi ya, n'ihi na ọtụtụ ndị na ọ bụ naanị mkpa iji gosi na gbara. Agbanyeghị, ndị ọchụnta ego na ụlọ ahịa dijitalụ ma ọ bụ mpaghara azụmaahịa na-ahụ onwe ha n'ọnọdụ nke ijupụta ụdị ahụ n'otu n'otu, ebe ọ bụ na Treasury amaghị ego ha na mmefu ha. Yabụ, ndị ọrụ nke onwe ha enweghị akwụkwọ.
Nke ikpeazụ ga-abanye data ọ bụla, ma ọ bụrụ na ha nyefere nloghachi nke ọ bụla, ọ ga-abụ nchịkọta nke ihe ekwuru na mbụ.
Inye ego iji mefuo ego na Treasury
Maka ndị ụtụ isi ahụ chọrọ ego iji kwụọ ụgwọ ha na ndị ọrụ ụtụ isi, ụlọ akụ emeela mgbazinye ego maka ebumnuche a. Ha nwere oke ọmụrụ nwa dị elu, nke dị iche n'etiti 5% na 9%, mana onye onyinye ha gụnyere atụmatụ bara uru karị nke na-ere ahịa ọbụlagodi na enweghị mmasi ma ọ bụ ọrụ. Ọnụ ego enyere, n'aka nke ọzọ, adịchaghị oke ma na-enwekarị oke kachasị nke anaghị agafe euro 2.000.
A na - ahụkwa ha iche na ụdị ego ndị ọzọ maka na usoro ịkwụ ụgwọ na - agbasi ike, na - ahapụ ha ka ha gbaa ihe karịrị ọnwa iri na abụọ dịka. Agbanyeghị na ịnweta ọwa ego ndị a bụ n'efu maka ndị niile chọrọ ya, ụfọdụ onyinye sitere na ụlọ akụ na-eche ma ọ bụrụhaala na ndị ahịa abanyela ụgwọ ọnwa ha yana ihe achọrọ maka nnweta ha. Dị ka mmeju, ha na-etinyekwa ohere nke sỌ bụrụ na nkwupụta ahụ adịghị mma, ị ga-eme ya ego nke mgbazinye ahụ ga-aga n'ihu na-enweghị ndị na-atụ ụtụ isi na-akwụ ụgwọ ego ọ bụla.
Ebe obibi n'ịntanetị
Iji nweta ugwo nke "Mkpebi / tsgwọ" na weebụsaịtị nke Agencylọ Ọrụ Taxtụ, ọ dị mkpa ịmata onwe gị na akwụkwọ ma ọ bụ kọmputa DNI ma ọ bụ na Cl @ ve PIN. Agbanyeghị, ị ga-eburu n'uche na ịkwụ ụgwọ nke mmezi ahụ na Cl @ ve PIN ga-adị naanị maka ụgwọ akaụntụ ahụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkwụ ụgwọ jiri kaadi, ọ dị mkpa ka ị mata onwe gị nwere akwụkwọ elektrọnik ma ọ bụ NJ kọmputa.
Tupu ịnweta ụdị ịkwụ ụgwọ ahụ, ọ ga-adị mma ka ị kwụsị ọrụ na-egbochi gị, n'ihi na nke a nwere ike igbochi gị ịnweta ihe akaebe nke ịkwụ ụgwọ (cheta ịka akara ya ọzọ mgbe ị mechara usoro ahụ).
Na Internet Explorer, gaa na “Ngwaọrụ” na ogwe menu (ma ọ bụrụ na arụghị ọrụ, pịa igodo F10), “Nhọrọ Internetntanetị”, “Nzuzo” ma wepu aka “Mee ka mgbochi mmapụta rụọ ọrụ”.
Na Google Chrome, gaa na "Hazie ma chịkwaa Google Chrome (ma ọ bụ akara ngosi akara atọ)," "Ntọala di elu", "Nzuzo na nchekwa", "Ntọala weebụsaịtị", "Pop-ups na redirects".
Na Mozilla Firefox, gaa na "Ngwaọrụ" ma ọ bụ akara ngosi nwere akara atọ, "Nhọrọ", "Nzuzo na Nchebe", "Ikike" ma wepụta "Gbochie windo mmapụta".
Na Safari, gaa na "Mmasị", "Weebụsaịtị", lelee "windo windo" ma gbanyụọ mgbochi maka weebụsaịtị maka ibe AEAT (ọ bụrụ n'ịchọrọ, ị nwere ike kwụsị ya n'ozuzu na bọtịnụ dị n'akụkụ aka nri ala)
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Taxtụ isi site na azụmaahịa kọmputa
Ndị ọrụ na-achọkwu e-azụ ahịa